के फेसबुक र ट्विटर नेपालमा दर्ता हुन आउलान्? सरकारले ल्याउँदैछ दर्ता नभए रोक लगाउने कानुन – MySansar
के फेसबुक र ट्विटर नेपालमा दर्ता हुन आउलान्? सरकारले ल्याउँदैछ दर्ता नभए रोक लगाउने कानुन
माथिको विधेयकको स्क्रिनसट कान्तिपुर दैनिकको अनलाइनमा प्रकाशित छ। विद्युतीय कारोबार ऐनलाई विस्थापित हुने गर ल्याउन लागिको सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको यो विधेयक ऐन बनी लागू भएमा फेसबुक र ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ। किनभने ती सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता भएका छैनन्। यो ऐन बनेमा निश्चित समय तोकेर सरकारले दर्ता गर्न आह्वान गर्नेछ। त्यो समय नाघेर पनि दर्ता हुन नआए सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ।
के अब मार्क जुकरबर्ग र ज्याक डोर्सी नेपालमा आएर सूचना विभागमा आफ्नो फेसबुक र ट्विटर दर्ता गराउन आउलान् त? वा कसैलाई दर्ता गर्न पठाउलान् त?
यो विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद्‌मा दर्ता गर्न ल्याएको समाचारमा उल्लेख छ। तर हालसम्म यो विधेयकको पूरा अंश कतै उपलब्ध भइसकेको छैन। यो विधेयकको मस्यौदा सूचना प्रविधि विभागको वेबसाइटमा भेटियो। तर त्यसमा यसरी सामाजिक सञ्जालका विषयमा भने केही राखिएको छैन।
पढ्नुस् छलफलका लागि तयार पारिएको मस्यौदा–